Ny boaty boaty an'ny EVE-0162 dia ahafahanao mampifangaro ny rano mafana sy mangatsiaka amin'ny hafanana tiana. Ny fangaro dia afangaro amin'ny rano mafana sy mangatsiaka alohan'ny hisintonana azy amin'ny faucet. Ny andian-kavoana faucet dobera dia safidy tsara amin'ny fitadiavana faucape tena mahasarika, dia ho lasa fifantohan'ny efitrano fandroanao izy io. Ao amin'ny WOWOW, afaka misafidy biriky faucets sy faucets marevaka ianao mba hifanaraka amin'ny efitra fandroana.
Momba ny maimaim-poana: Namboarina sy novokarina miaraka amin'ny fitaovana polimerim-pandrosoana (tena maivana, fa tena matanjaka), mahatohitra ny harafesina, fikapohana ary ny ahitra amin'ny fampiasana andavanandro. Tsy ampidirina ny fantsom-pifandraisana sy ny fisotroana bar.
Aza atao ny manelingelina azy amin'ireo nozzle massage: koba tokana, mora mifehy ny fikorianan-drano sy ny mari-pana ny rano
Drafitra fotsy tsy manam-paharoa: ampio ny hatsaranao kely amin'ny fandroana.
Ny valva volam-bary dia manana fiainana ela, fiasa maharitra, ary tsy mitete.
Mora mametraka sy manara-maso ny rano: loaka 1 sy mahazaka tokana, mora mifehy rano mafana sy mangatsiaka.
Karazan'endrika: fandroam-baravarankely mandro / baravarankely milentika
SKU: EVE-0162 Sokajy: Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana, Faucets fandroana finday Tags: mpangaro mifangaro tokana, afangaro tsara, taps